Showing ३१-४० of १८१ items.
सरकारले पेलेरै ल्यायो चिकित्सा शिक्षा विधेयक
धरान । संसद्ले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका वावजुद पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । यही विधेयकको विरोधमा प्रा.डा. गोविन्द केसीले १६ औं सत्याग्रह गरिरहेका छन् । १५ औं सत्याग्रहपछि गरिएका सहमति लागू नगरेको भन्दै डा. केसीले इलामबाट १६ औं सत्याग्रह शुरु गरेका थिए । यता नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विधेयक हुबहु लागू हुनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको थियो । यसअघि सोमबार र मङ्गलबारको संसद् अवरुद्ध पारेको भए पनि शुक्रबारको संसद्बाट विधेयक पारित गरिएको हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलल
भारतमा बेचिएकी धरानकी चेलीको उद्धार
धरान / भारतको दिल्लीमा बेचिएकी धरानकी एक १६ वर्षीया किशोरीको उद्धार गरिएको छ । भारतस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा माइती इण्डिया र दिल्ली प्रहरीसमेतको सक्रियतामा बेचिएकी चेलीको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो । बिक्री गर्नमा संलग्न धरान–१७ का ३१ वर्षीय सन्तोष राईलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले पक्राउ गरेको छ । पुष १६ गते बेचिएको भन्दै पीडित किशोरीको दाजुले दिएको निवेदनको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । दूताबासको पहलमा दिल्ली प्रहरीसहित नेपाल प्रहरीले पुष २४ गते उद्धार गर्न सफल भएको थियो भने पुष २९ गते नेपाल ल्याइएको थियो । बेचविखनमा संलग्न राईलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद
प्रकाशित मितिः माघ ३, २०७५
१,१५८ पटक पढिएको
साहित्यकार शरण राई भन्छन्–‘महिनौंसम्म नुहाउन्थ्यौं’
भाइबहिनी हो, आज हामीले ३८ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अध्यापक गरिसकेका सहप्राध्यापक तथा साहित्यकार शरणकुमार राईको कथा भन्ने प्रयास गरेका छौं । २००४ चैत्र २४ गते जन्मिएका राईको पाठशाला शिक्षाको प्रारम्भ कसरी भयो त ? उनकै शैलीमा । भोजपुरको छिनामखु गाउँबाट २० मिनेटको उकाली–ओराली हिँडाइ पछि त्रिभुवन धर्मोदय प्राथमिक पाठशाला आइपुग्थ्यो । बाजे र बुबाको प्रेरणाले नै सानै उमेरमा स्कुल जाने वातावरण मिल्यो । बाजे ऊ बेला प्रहरीको हवल्दार पदमा कार्यरत भएकाले काइते अक्षर लेख्नुहुन्थ्यो । पढाउनुपर्छ भन्ने बाजेमा चेत थियो । बुबा ७ वर्ष पल्टन लाहुरमा बसेको र नेपालमा रक्षा दलमा क्
राजविराज । हतियारधारी एक समूहले सप्तरीमा प्रहरी हबल्दारमाथि गोली प्रहार गरेर फरार भएको छ । मोटरसाइकलमा आएका २ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा कार्यरत प्रहरी हबल्दार महेन्द्रप्रताप यादवलाई गोली हानी फरार भएका हुन् । खडक नगरपालिका–८ विशनपुर चोकमा ड्युटीमा रहेका यादवलाई साँझ साढे आठ गोली प्रहार गरिएको हो । गोली प्रहार गरेर उनीहरू बोदेबरसाइन बजारतर्फ भागेको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरका प्रहरी निरीक्षक विष्णुप्रदीप बस्यालले जानकारी दिए । हतियारधारी समूहले प्रयोग गरेको मोटरसाइकलको नम्बरको खुलेको छैन । गोली प्रहारबाट घाइते हबल्दार यादवलाई तत्कालै उपचारका लागि विराटनगरस्थित न्यूर
बीपी प्रतिष्ठानको विशेषज्ञ टोली गृहले रोकेको भन्ने सबै अफवाह होः उपकुलपति
धरान । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर १६ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको उपचारका लागि बीपी प्रतिष्ठानबाट हिडेको टोलीलाई गृहले रोकेको भन्ने खबर हल्लामात्रै भएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले बताएका छन् । उनले डा. केसीको उपचारको लागि बीपी प्रतिष्ठानका टोली तयारी अवस्थामा रहेको बताए । उनले गृहबाट कुनै पनि चिकित्सकलाई रोकेको भन्ने खबर हल्ला मात्रै रहेकाले त्यसका पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले भने,–‘यो सबै हावा कुरा हो । यस्तो हल्ला कहाँबाट आउँछ । हाम्रो टोली तयारी अवस्थामा छ । बीपीले पनि डा. केसीको उपचारका लागि आइसियु तयारी अवस्थामा राखेको छ ।’
बलिमान र पदमकुमारी राई दम्पतीलाई जन्मकैद
धरान / धरान–१६ को चर्चित १३ वर्षीया बालिका अनुषा राई हत्या प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ सोमबार भएको छ । जबर्जस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा धर्मपिता बलिमान राई र उनको पत्नी पदमकुमारी राईलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाइएको हो । मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलअनुसार उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला गरिएको जिल्ला अदालतका प्रवक्ता गोपाल गिरीले जानकारी दिए । जन्मकैद अनुसार २५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत ७ नम्बर इजलासका न्यायाधीश खिमानन्द भुषालको इजलासले राई दम्पतीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । अदालतले करिब २२ महिनापछि मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेको हो
प्रकाशित मितिः पुष ३०, २०७५
३,८६७ पटक पढिएको
थ्री स्टार सम्झिइने इटहरी गाेल्डकप माघ १२ देखि
इटहरी । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो बनेको थ्री स्टार क्लब मदन भण्डारी स्मृति इटहरी गोल्डकपमा सम्झिइने नाम हो । किनकी इटहरी गोल्डकपको पहिलो संस्करणमा केही समय एन्फासँगकाे विवादका कारण स्थगित गर्दै डेढ वर्षपछि पुनरागमन गरेकाे थ्री स्टारले उपाधि उचालेको थियो । त्यही गोल्डकपको दोस्रो संस्करण माघ १२ देखि हुँदै छ । साविक विजेता थ्री स्टारको आगमनसँगै विदेशी क्लबले पनि सहभागिता जनाउने सङ्केत आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा गरेको छ । दशकदेखि नै राष्ट्रिय जागृतिले इटहरीमा फुटबल प्रतियोगिता गराउँदै आएको थियो । त्यसबेला बी डिभिजनस्तरको प्रतियोगिता गराउने जागृतिले गतवर्षबाट
जग्गा खण्डीकरण फुकुवा, भूमाफियालाई मालामाल
धरान । सरकारले करिब डेढ वर्षदेखि रोक लगाएको जग्गा खण्डीकरण फुकुवा गरेको छ । सरकारले २०७४ साउन २६ गतेदेखि जग्गा खण्डीकरण रोक्न निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय फुकुवा गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतीयोग्य जमिन नभएको भनेर सिफारिस गरेको आधारमा कित्ताकाट फुकुवा गरिएको अर्यालले बताइन् । जग्गा कित्ताकाट रोके पनि विभिन्न बाटोबाट भूमाफियाहरूले खण्डीकरण गर्दै आएका थिए । रोक्का गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ भएकाले पनि खुला गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
संसद् तताउने केराबारीको क्रसर व्यवस्थित हाेला ?
केराबारी / क्रसरका कारण संसद्मा समेत बहसको विषय बन्ने केराबारी गाउँपालिकाकाे लागि क्रसर टाउँकाे दुखाइकाे विषय बन्ने गरेकाे छ । जनप्रतिनिधिहरूकै क्रसर भएकाले पनि दीगो व्यवस्थापनकाे प्रश्न टड्काराे रूपमा उठ्ने गरेकाे छ । सरकारले क्रसर उद्योगको हकमा बनाएको पछिल्लो मापदण्ड कार्यान्वयन तहमा बहस भइरहेको छ । क्रसरका कारण उत्खनन् तथा चोरी निकासी बढेको भन्दै सबत्र आलोचना हुने गरेको यथार्थ लुक्न सकेकाे छैन । ससंदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले २०६७ मा क्रसरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । लागू भएको २ वर्षभित्र सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समिति
धरान/सायद उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । जसले गल्फ घर प्राप्त गरे । क्याडी ब्वाइबाट एमेच्योर गल्फर बनेको वर्ष २०१४ मै सूर्य नेपाल इष्र्टन ओपन गल्फ टुरमा एमेच्योरतर्फ विजेता बनेका थिए, धरानका शुक्रबहादुर राई । समग्रमा उनी टप ३ मा परेका थिए । जसले प्रोफेसनल गल्फरहरूलाई पनि पछाडि पारेका थिए । त्यही वर्षबाट ‘विनर’ को ट्याग लागेका शुक्रको यात्रा जारी छ । देशविदेश गरी आठवटा उपाधि जितिसकेका छन् । गल्फका यी उम्दा एमेच्योर अहिले २१ वर्षका छन् । सन् २०१२ उनी क्याडी व्बाइमा प्रवेश गरे । घर नजिकै गल्फ कोर्ष भएकाले उनको गल्फप्रति लगाव बस्यो । स्कुल छुट्टि हुनेबित्तिकै झोला फुत्त फालेर उनी क्याडी बन्
१,१५७ पटक पढिएको